Investment - Logistics Guide
Saturday, 25 June 2022 03:03
MSC က ကွန်တိန်နာသင်္ဘော အသစ် အစီး ၂၀ တရုတ်သင်္ဘောကျင်းမှာ ထပ်မံမှာကြား
Sunday, 29 May 2022 02:42
Petronas က LNG သင်္ဘော ၉ စီး တိုးချဲ့သုံးစွဲရန် သင်္ဘောလိုင်း ၃ ခု ရွေးချယ်
Wednesday, 25 August 2021 03:56
AirAsia က စားစရာပို့ လက်တံ ထပ်မံ ဆန့်ထုတ်
AirAsia ရဲ့ လောဂျစ်စတစ် လက်တံ Teleport က မလေးရှား အွန်လိုင်း စားစရာပို့ ပလက်ဖောင်း DeliverEat ကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီး လောဂျစ်စတစ်လက်တံကို ထပ်မံ ဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်။
ရှယ်ယာများကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း၊ နော်ဝေပြည်သူ့ပင်စင်ရံပုံငွေ KLP ကကြေညာ
Tuesday, 15 December 2020 03:47
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် စီးပွားရေးအချက်အချာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တည်ဆောက်မည်
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွက် စီးပွားရေးအချက်အချာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဖြစ်လာမယ့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း Matarbari Port Development Project (MPDP) တည်ဆောက်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေပြီ ဖြစ်သည်။
Wednesday, 09 September 2020 08:42
နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များ ခန့်ထားခွင့်ပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်
Tuesday, 21 April 2020 05:12
အမေရိကန်ရေနံဈေးနှုန်း သုညအောက် (-)၃၈ ဒေါ်လာသို့ ကျဆင်း
Wednesday, 15 April 2020 12:35
စင်ကာပူ ဘန်ကာရေနံလုပ်ငန်း Hin Leong ဘဏ်များအား အကြွေး အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၃ ဘီလျံတင်
ဘဏ်များက မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ထားရှိရမည့် အနည်းဆုံး သီးသန့်ငွေ လိုအပ်ချက် ( Minimum Reserve Requriement) ယာယီပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ဘဏ်များက မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ထားရှိရမည့် အနည်းဆုံး သီးသန့်ငွေ လိုအပ်ချက် ( Minimum Reserve Requriement) ယာယီပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၀) ၅ ရာခိုင်နှုန်းအစား ၃. ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ဘဏ္မ်ားက ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ထားရွိရမည့္ အနည္းဆုံး သီးသန႔္ေငြ လိုအပ္ခ်က္ ( Minimum Reserve Requriement) ယာယီျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၆/၂၀၂၀) ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအစား ၃ . ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္